Ogaden News Agency (ONA) – Guul ama Geeri waa Halhayska Naftii-Huraha iyo Halgamaaga JWXO
Guusha inuu Gobanimadoonka xaq-u-dirirka ah leeyahay shaki kuma jiro oo waa mid ay taariikhda xustay, Ilaahayna wuxuu balanqaaday inuu u gargaarayo qofka dulman ee xaqiisa u dagaalamaya. Taasoo jirta oo hubaal ah, ayaa laga yaabaa in la’ is weydiiyo muxuu qofka Gobanimadoonka ah uga dhigtaa halhays weedhan -Guul ama Geeri-, iyadoo loo arko qof dhintay inuusan guul gaarin.
Ujeedada 1aad ee Halhayskan wuxuu muujinayaa hadafka aan ka soo laabashada lahayn ee qofka Gobanimadoonka ah uu hiigsanyo ee ah inuu Guusha Gobanimada Gaadho ama uu diyaar u yahay inuu Dhiigiisa u huro Gobanimada uu saaxiibkii gaadhi doono.
Hordhacaa yarka ka dib; waxaa ka socda Ogadenya dagaalo xoogan oo galay hadda marxalad cusub oo hubaal ah inay gumaysiga xanuujin doonto. Bishii la soo dhaafay oo kali ah waxaa lagu qaaday Gumaysiga iyo adeegayaashiisa ugu yaraan 34 Dagaal oo qaarkood ay socdeen maalmo. Dagaaladaa waxaa cadawga lagaga dilay inta la hubsaday 233 askari oo darajooyin kala duwan lahaa iyo dhaawac aan la koobi karin. Dagaalada inta badan wuxuu cadawga si dhaqsa leh uga urursadaa goobta bakhtigiisa iyo dhaawaca oo siyaaba kala duwan uu ula cararo.
Dhimashada iyo dhaawaca ciidamada gumaysiga iyo dhidid-dhowrka la socda ma’aha hadda wax laga qarin karo dadweynaha dagan magaalooyinka waaweyn gaar ahaan Jigjiga oo sida uu noo soo tabiyay wariyaha qarsoon (Noora Afgaab) ee Adisababa wararka nooga soo dira, hadda loo baneeyay qayb ka mid ah isbitaalka weyn ee Kaaramardha. Taasi waxay ku dhalisay niyad jab iyo mooraal xumo ciidamada gumaysiga, gaar ahaan maleesiyadii loogu talagalay inay dhufays u noqdaan. Wararka ugu dambeeya een ka helayno Jigjiga waxay sheegayaan in odayaasha lagu amray inay keenaan dhalinyaro horleh oo tababar loo furo si loogu daadiyo dabka, waxaana loo shiriyay jifo, siduu horey u tilmaamay warbixintii Faysal Cabdiweli. Si hadaba mooraalka loogu soo celiyo maxaysatadaa ayaa lagu maaweeliyaa waxaan dilnay ama qabanay N/hure daraja sare lahaa, taasoo maalmo sii buunbuuniyaan. Waxaanay ogayn in CWXO iyo halgamaaga JWXO dhamaantood ay ku talagaleen guusha labada daarood midii u soo hormarta.
Dagaalkii Uxud ee asaxaab badan ay ku shihiideen ayuu markii ay soo rogaal celiyeen asaxaabta Abu-Sufyaan oo waqtigaa hogaaminayay mushrikiinta Quraysh buurta intuu fuulay ku dhawaaqay ereyo ku degasho ah. markaasuu Rasuulka CS ku yidhi asaxaabta maad u jawaabtaan. Maxaan ku dhahnaa ayay weydiiyeen, markaasuu rasuulka CS yidhi dhaha; “Badar uma dhiganto Uxud oo Kuwii idinka dhintay Naarta ayay jiifaan, Kuwanagana Janada ..( لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ). Ilaahayna wuxuu ugu sheegay Quraanka in sababta ay tahay Ilaahay oo sidaa la jeclaaday si loo imtixaano loogana doorto Shuhadaaوَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ) ..
Waxaa la’isla qiray in N/hurayaasha CWXO markay shihiidaan ay ka soocan yihiin maydka kale oo calaamada badan oo muujinaya inuu Ilaahay ka aqablay shahiidnimadii ay soo doonteen ay ka muuqato, kuwa kale ee gumaysiga iyo dhidid-dhowrka la socdana ay durbaba uraan oy qarxaan lagana kala cararo. Arintaa waxaa noo xaqiijiyay dhalinayara badan oo sababtaa darteed uga soo baxsaday Hawaarinta markay arkeen mucjisooyinkaa qaar ka mid ah.
Balanteenu waa – Guul ama Geeri –